दलहरुबाट संविधान बन्दैन | Image Channel Blog | ImageKhabar.com
होमपेज / ब्लग / दलहरुबाट संविधान बन्दैन
दलहरुबाट संविधान बन्दैन Published: April 12, 2015 | आईतवार 29 चैत, 2071 | 5:30 AM | By Kalyandev Bhattarai | Viewed: 2196 times
कल्याणदेव भट्टराई ।संविधान बन्न नसक्ने या बनाउन कठिन विषय नै होइन । केही अपवादलाई छोडेर भन्ने हो भने संसारका सबै देशमा संविधान निर्माण भएकै छन् । नेपालमा मात्र बन्न नसक्नु को मूल कारण के होला ? यो प्रश्नले आज तीन करोड नेपालीलाई सताइ रहेको छ । संविधानका नाममा आमनागरिक दुखी र चिन्तित बनिरहेका छन् । नेपालमा संविधान बन्न नसक्नु केही कारण पक्कै छन् ।ती कारण माथि नेपालीले गम्भीर भएर चिन्तन गर्नै पर्छ । संविधान निर्माणका बाधकबारे नागरिकले निक्र्यौल निकाल्नै पर्छ ।
संविधान कसले बनाउने ? हामी यही प्रश्नमा आएर नराम्रोसंग चुकेका छौं । अलमलिएका छौ । संविधान नेपाली नागरिकका सही प्रतिनिधिले बनाउनु पर्ने विषय थियो । अपसोच संविधान बनाउने कार्य आमनेपालीका असली प्रतिनिधिको जिम्मामा पुकेको छैन् । संविधानसभामा पुगेका व्यक्तिहरुको अनुहार शुद्ध छैन् । त्यसैले पनि अहिले देश टुक्रने हो कि भन्ने पिरलोमा नागरिक परेका छन् । संविधानसभामा पुगेका सदस्यहरु नै जातीय घृणा फैलाउने, नेपालीहरु बीचको भाइचारा सम्बन्धलाई तोड्ने कार्यमा सक्रिय भएको देखिएको छ ।
केही अपवादलाई छाडेर राजनीतिमा देश लुट्न सक्रिय हुनेहरुको जमात बलियो बन्दै छ । २००७ साल देखि आजसम्म नेपाली राजनीतिमा बेइमानी, लुट र भ्रष्टाचार मौलाएको छ । राजनीतिमा अनैतिकहरुको बोलवाला भएका बेला फेरि पनि उनै र उस्तैलाई संविधान बनाउने कार्य सुम्पनु गलत थियो । नागरिकको यही कमजोरीको फाइदा अहिले दलहरुले लिएका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा संविधान बनाउन दलहरुले बाहिरबाट प्रतिनिधि छान्नु पर्ने थियो । अहिलेको अवस्थामा दलहरुबाट चुनिएका व्यक्तिहरु संबिधान निर्माणका लागि सही प्रतिनिधि हुन सक्दैनन् । नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले पहिला आफ्नो निजी स्वार्थ, त्यसपछि गुटगत स्वार्थ, त्यसपछि पार्टीगत स्वार्थ हेर्ने भएकोले संविधान बनाउने कुरामा उनीहरु सचेत होलान भन्ने कुरा कल्पना बाहिरको हो ।समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा जे जस्तो व्यापार भयो यसैबाट पनि सविधान नबन्ने संकेत आएकै हो । पैसाको भर अनि चाकरी र चाप्लुसीका आधारमा समानुपातिकमा लगिएका व्यक्तिहरुलाई कसरी जनप्रतिनिधि भन्ने ?
संविधान बनाउन आजसम्म बौद्धिक छलफल भएको छैन् । जुन अति आवश्यक छ । अहिलेका केही नेताहरुका बिचको फलफलले पेचिलो बन्दै आएको संविधानसभाबाट संविधान आउन सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने आधार देखिदैन । हामीले आलुको बिउ रोपेर काउली फलाउने असफल प्रयास गर्दैछौ । अहिले संविधानसभामा भोकाएकाहरुको जमात मात्र देखिन्छ । उनीहरु पहिला आफू अघाउन चाहन्छन् । यसैले पनि दलहरु विकासमा केन्द्रित भएर विज्ञहरुलाई संविधान बनाउन दिए भने संविधान पनि बन्ने र मुलुकले निकास पनि पाउने छ ।